उत्तराधिकारी को ? – Shabdayatra Prakashan
admin,2years ago3min read 7
‘नेपालभूमि राष्ट्रिय साप्ताहिक’ को वर्ष ३७, अङ्क ४६, २०७६ फागुन २७ गते मङ्गलबार प्रकाशित मुखपृष्ठमा विद्वान् लेखक मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायले शब्दयात्रा प्रकाशनले २०७६ माघ २५ गते काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको स्रष्टा सम्मान तथा कृतिहरूको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा दर्शकदीर्घामा आफूसँगै बस्नुभएका साहित्यकार गोपाल पराजुलीले कार्यक्रमको भव्यता, शालीनता र गरिमामय सहभागितालाई देखेर गदगद हुँदै ‘तर…’ का बारेमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरा लेख्नुभएको छ । उक्त पत्रिका पढ्ने जोकसैले पनि ‘तर…’ का सम्बन्धमा बुझ्नुभयो नै होला । उक्त लेखमा हरि मञ्जुश्रीको नेतृत्वमा रहेको शब्दयात्रा प्रकाशन, मोहन दुवालको नेतृत्वमा रहेको जनमत प्रकाशन र चन्द्रबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको सुभाष स्मृति प्रतिष्ठानको भविष्यका बारेमा ‘तर…’ ले चिन्ता प्रकट गरेको छ । त्यसै गरी दृष्टान्तका रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र संस्थापक डा. सुरेशराज शर्मा तथा धुलिखेल अस्पताल र डा. रामकण्ठ श्रेष्ठलाई पनि उक्त लेखले समेट्न खोजेको छ । डा. सुरेशराज शर्माको बहिर्गमनपछिको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अवस्थाको उदाहरण दिँदै डा. रामकण्ठ श्रेष्ठपछि धुलिखेल अस्पतालको अवस्था के होला, कसरी चल्ला भन्ने चिन्ता प्रकट भएको छ ।
उक्त लेखले देशका अन्य भागमा यसै गरी स्थापना भएका सङ्घ–संस्था तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि छोएको छ । त्यसै गरी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनको पनि चर्चा गरिएको छ । लेखमा वेदका मन्त्रहरूका सन्दर्भमा ऋषिमुनिहरू अनि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह एवम् एवं काभ्रे जिल्लाका मेयरहरूसमेत अटाएका छन् । अन्त्यमा संस्थापक संस्थाहरूको फोटोकपी उत्तराधिकारीको अपेक्षा त्यति सहज हुँदैन भनिएको छ । यस लेखमा ‘शब्दयात्रामा उत्तराधिकारी को ?’ शीर्षकमा विशेष गरी ३ वटा संस्थामा तत्तत् व्यक्तिको बहिर्गमनपछि नेतृत्व कसले लिने हो, यसको जवाफ तीनैजनासँग छैन भनिएको छ ।
यो मेरो लेखको आशयचाहिँ के रहेको छ भने मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायको लेखमा गोपाल पराजुलीले प्रकट गर्नुभएको चिन्ता हामी सबैको हो, सायद मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायको पनि हो । म यी तीनैवटा संस्थाहरूसँग कुनै न कुनै रूपले आबद्ध छु । सुवास स्मृति प्रतिष्ठानको त कार्यसमितिमै रहेको छु । यसकारण यिनलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । शब्दयात्रा प्रकाशन र जनमत प्रकाशन त आफ्नै खुट्टामा उभिइसकेका छन् । सम्मान कार्यक्रमका लागि अक्षयकोष स्थापना भएका छन् । तर पनि हरि मञ्जुश्री र मोहन दुवालको अभावमा आजकै रूपमा यी संस्था चल्लान् भन्न सकिँदैन । केही गरी खराब प्रवृत्तिका मानिसको हातमा नेतृत्व गयो भने यी संस्था धराशायी नहोलान् भन्न सकिन्न । यसतर्फ त सोच्नु नै पर्छ । जहाँसम्म सुभाष स्मृति प्रतिष्ठानको कुरा छ, झन् सोचनीय छ । उक्त प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाकालदेखि सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान अतुलनीय छ । प्रतिष्ठानले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान गरेको जगजाहेरै छ । ‘तर…’, यहाँ ‘तर…’ अलि फरक अर्थमा छ । सुवास स्मृति प्रतिष्ठानको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सीमित मात्रमा अक्षयकोष छ । उक्त कोषको ब्याजले र सीमित सदस्यहरूको सहयोगबाट संस्था चल्न सक्ने अवस्था छैन । वर्षेनी खर्च भएकोमध्ये ठूलो रकम संस्थापक अध्यक्षको परिवारबाट सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ । यसले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? चन्द्रबहादुर खड्कापछि के हुने हो ? यो प्रतिष्ठानलाई दीर्घजीवी बनाउने हो भने ५० लाखभन्दा बढी अक्षयकोषमा रकम पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा चन्द्रबहादुर खड्कापछि नेतृत्वमा को भन्नुभन्दा पनि संस्था नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने मुख्य चिन्ता हो ।
साहित्यकारद्वय हरि मञ्जुश्री र मोहन दुवालले काभ्रे जिल्लालाई साहित्यिक प्रयोगशाला र बौद्धिक ल्याब बनाउनुभयो । देश–विदेशमा काभ्रे जिल्लालाई चिनाउनुभयो । नेपालको साहित्याकाशमा तला थप्ने काम गर्नुभयो, जुन अविस्मरणीय छ । काभ्रेली जनताले, नेपालको साहित्यिक क्षेत्रले उहाँहरूलाई कदापि भुल्न सक्तैन, भुल्नु पनि हुँदैन । तर, फेरि यहाँ पनि ‘तर…’ आएको छ । मेरो यहाँको ‘तर…’ तीनैजना संस्थापकहरूप्रति लक्षित छ । उहाँहरूले सबल, सक्षम संस्थाहरू स्थापना गर्नुभयो । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । संस्थालाई जीवन्त राख्नुभयो । यतिमा मात्रै उहाँहरूको कर्तव्य पूरा भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको भूल हुनेछ । उहाँहरूले के बुझ्नुप¥यो भने मुकुन्दप्रसाद उपाध्यायको लेखमा जुनजुन संस्थाहरूको उल्लेख भएको छ र तिनको अवस्था दर्साइएको छ, यी संस्थाहरूलाई पनि तिनैको स्तरमा पु¥याउने कि जीवन्त राख्ने, यो उहाँहरूमै निर्भर छ । त्यसकारण जसरी उहाँहरूले संस्था निर्माण गर्नुभयो, अब त्यसै गरी आफूपछि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अथवा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी सक्षम व्यक्ति निर्माण गरी आफू जीवित छँदै नेतृत्व हस्तान्तरण गरी कमी–कमजोरी सच्याउन लगाई अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
ज्योतिष तालिमसम्बन्धी सूचना
शब्दसाधकहरूको सालिक : पाँच व्यक्ति पाँच अभिव्यक्ति
शब्दयात्राका पुस्तक नैमिषारण्यमा सार्वजनिक हुने
सालिकको अनावरण कार्यक्रममा निमन्त्रणा
पुस्तक सार्वजनिकीकरण, वृत्तचित्र प्रदर्शन र सम्मान एकैपटक
शब्दयात्रा प्रकाशनको ‘श्रीस्वस्थानी व्रतकथा’ हरेक अध्याय उपहार
‘शब्दसंवाद’ मा चन्द्रबहादुर खड्का